पेटको ग्यासबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपाय ! ग्यास्ट्रीकको समस्या १ मिनेटमा समाधान - Enepalese.com
पेटको ग्यासबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपाय ! ग्यास्ट्रीकको समस्या १ मिनेटमा समाधान
इनेप्लिज २०७५ फागुन ८ गते १२:१४ मा प्रकाशित
एसिडिटी वा ग्यास । पेट ढुस्स फुल्ने । खानामा अरुची हुने । तपाईंलाई लाग्दो हो, यो सामान्य कुरा हो । तर, एसिडिटी वा ग्यासलाई बेवास्ता गर्नुभयो भने यो असामान्य बन्न सक्छ । भोलिका दिनमा तपाईंलाई जटिल रोगको शिकार बन्नसक्नुहुनेछ । जबकी सामान्य प्रयासबाटै एसिडिटीबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसका लागि केही घरेलु काइदा छ, जो सरल र छरितो पनि छ । साथसाथै यसको नतिजा पनि तुरुन्त प्राप्त हुनेछ । सामान्यतया, आमाशयमा एसिडको उत्पादन धेरै भएमा एसिडिटीको समस्या हुन्छ, जसले गर्दा खाना राम्ररी पदैन । र, त्यसबाट जुन रस बन्छ, त्यो एसिडमा बदलिन्छ ।
पेटमा एसिड भएमा यसले विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँछ । लामो समयसम्म एसिडिटीको समस्या रहेमा अम्लपित्त नामको रोग लाग्ने गर्छ । यो रोग वातावरणको आदर्रताका कारण हुन्छ । त्यसैले त, एसिडिटीको समस्यामा वर्षामा धेरै हुन्छ ।